Vietnam: Fety faha-arivo taona an’i Hanoi · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Oktobra 2010 19:46 GMT
Avy amin'ny takelaka Flickr an'i haithanh ampiasaina noho ny dina CC License Attribution 2.0 Generic
Arivo taona i Hanoi. Naharitra hafoloana (1-10 oktobra) ny lanonana fanamarihana izany fotoan-dehibe izany. Mizara ny fomba fijery sy ny eritreriny tamin'ny nanatontosana ity fihetsiketsehana ity ny mpamaham-bolongana.
Aaron Joel Santos mitantara ny fizotry ny sehatra any Hanoi nandritra ny andro voalohan'ny fankalazana
Ho feno 1000 taona i Hanoi. Haharitra 10 andro. Fa nanomboka androany maraina ny fety. Manomboka amin'ny valo amin'ny fomba ofisialy saingy raha niala tao an-trano aho tamin'ny 7ora sy sasany maraina dia efa misaritaky ny fety sahady ny arabe. Tapaka ny lalana, feno ny fivilian-dalana, mangoro-potsy ny olona, najoro ny marika “Tsy azo idirana” …Niditra tao amin'ny torajofo aho androany maraina. Ary nampiala voly izany.
Miramirana avokoa ny rehetra. Nanala azy niaraka tamin'ny rehetra aho nandritra ny fety izay tsy tsapako akory ny halavan'ny fotoana, fa nientanentana avokoa ny olon-drehetra teto an-toerana, tamin'ny farany.
Vietnam Adventures indray mamaham-bolongana momba ny fikarakarana ny fotoana
Araka ny hitako aloha, dia napetraka manerana ny tanàna ny jiro, indrindra fa eny amin'ny lalana Dien Bien Phu Street sy anelanelan'i Andrefana sy ny Farihy Truc Back. Toeram-panintonana olona maro mahamaro olona an'arabe ny jiro amin'ny alina. Efa maro ny asa natao teo amin'ny kianja Ba Dinh, anoloan'ny mozea HCM, izay hanatontosana ny fankalazana. Eo ampanaovana famerenana ny vako-drazana ny eo anilan'ny arabe; teny an-dalana hody avy any am-piasana aho no niara-nijanona tamin'ny mpitondra môtô miisa 100 eo ho eo, mijery izany.
Ehrin Macksey mitantara ny fihetsiketsehana tamin'ny alahady
Manao akanjo Ao Dai ny zazavavy, mitondra sy mametaka afisy fanentanana ny mpiasan'ny fihetsiketsehana ary manemitra manodidina fasan'ny maherifo ny miaramila. Tonga hijery izay karakarain'ny ao an-drenivohiny ho azy ireo amin'ny alahady ny avy avy any ambanivohitra mitsidika ny tanàna. Olona tso-po sy moramorainy ny Vietnamiana. Nahafinaritra ahy indrindra ny fotoana nandehandehanana, nifampiresahana, niaraha-nakana sary tamin-dry zareo sy ny mipikapika sary etsy sy ery. Ny hany zavatra somary manohintohina dia ny fihetsika mahery ataon'ny polisy sy ny fanositosehana ny olona tsy hijery ny famerenana ny matso an'arabe.
Manamarika ny fiantraikan'ny faha-1000 taonan'i Hanoi, izay fantatra ara-tantara hoe Thang Long eo amin'ny mponina eo an-tanàna i Amy Gottlieb
Tsy maintsy miaiky aho – fa na dia ratsy aza ny fifamoivoizana, tapaka hatrany ny lalana, maro dia maro ny mpizahatany, dia mamindra tokoa ny fanahin'ny tanàna! Heno mihitsy ny angôvo, feno olona ny arabe; ary hita ho falifaly kokoa ny olona, ary hita ho ao anatin'ny fety tokoa ny olona.
Tamin'ny fampiasana ny tenifototra #hanoi1000 no nahitana ireto hevitra ireto:
Jen_Vuongyen: RT @benjaminbland: Tsy mbola nahita vietnamiana mifanety tahaka izao aho hatramin'izay niainako aho: porofo izany fa tonga eto Hanoi hankalaza ny faha-1000 ny avy any ambanivohitra
dragfyre: mijery ny afomangaara-kolontsaina eto #Hanoi. mahavariana. nahagaga fa nofaranany tamin'ny hiran'ny hafaliana nataon'i Beethoven izany
danielleto: Ngôma an'i Hanoi tananako ka miarahaba anao
fisheggtree: Ilay novinavinaina indrindra herinandro vitsivitsy lasa izay, tsy nahomby teo amin'ny lafiny fizahantany ny #hanoi1000 noho ny fitodihana be loatra tamin'ny tato an-toerana sy ny tsy fahalalana ny tsenam-bahiny
lovesyr96: RT @UkissHARD: HAPPY #HANOI1000 ~ Anio ny tsingerintaona faha-1000 an'i HANOI!!!Mampirehareha anay tokoa izany, tsy maninona na Hanoi-ian izahay na tsia ^^~ raha mbola Vietnamiana ihany koa
linhngjb: Manakory e!!! vao nifoha! androany no 10/10/10. Feno 1000 taona izao i Ha Noi -tananako – !!! Arahaba fety ry Ha Noi!!! Manana hambo noho ianao <3 #hanoi1000
Hitan'i Steve Jackson fa maro tamin'ny eritreritra nivoaka tamin'ny twitter no ahitana taratra ny fahadisoam-panantenan'ireo mpiserasera tamin'ny fomba nanatontosana ny lanonana.
Mety mampanontany tena ny fomba nanatontosana ny fankalazana saingy hita fa renivohitra miavaka tokoa izy. Saingy, misalasala aho raha izaho irery no ho faly rehefa mifarana ny #hanoi1000. Tena tsapako ho malahelo ny toerana aho nandritra ny folo andro.
Miarahaba nahatratra ny tsiingerintaona ry Hanoi, manantena ny hahita ny endrikao taloha indray aho.
Navoitran'i Philip Arthur Moore ny sary manavaka ny lanonan'ny tsingerintaona faha-1,000 an'i Hanoi
Angidimby, olona eny an-tampontrano, sakeli-dalana tsy misy olona; izay no hitako amin'ny faha-arivo taonan'i Hanoi. Misalasala ny handeha an-toeran-kafa ankoatra ny eto andavaranako aho anio. Tsy mahazaka ny any anaty vahoaka loatra aho, ka raha tarafina tamin'ny sivy andro lasa dia hikorontana tanteraka ny faritra taloha an'i Hanoi
Tsy dia mazoto loatra i Andy Engelson hifety araka ny fanazavany rehefa mitodika tamin'ilay fipoahana afomanga nahafatesana olona andro vitsy mialoha ny fety sy ny tondra-drano tany Vietnam afovoany ry zareo
Niezaka aho ny hamory ny fifaliako haka sary sy hanatrika fety. Saingy tsy vatrako ilay izy. Ny hira tena nandrandraina indrindra moa dia nahakivy tanteraka. fiasco. Faly aho fa vita iny. Afaka miverina amin'ny fiainanay amin'izay ve izahay rehetra, ankehitriny?
Angamba mampatory avokoa ny fandaharam-potoana voalahatra rehetra. Azafady, tsy mahafa-po ahy ny fialam-boly amina endrika fetin'ny sarimihetsika revolisionera, mozikam-pitiavan-tanindrazana mankarenin-tsofina ary ny fitohanam-pifamoivoizana. Niteny fitohanam-pifamoivoizana moa aho? faly aho fa tsy tratrany omaly izay nikatsoan'ny filohan'i Vietnam mipetraka eo amin'ny cortege nandritra ny dimy ora. Manantena aho fa nanana minibar izy
Mitsikera ny drafitry ny mpikarakara i On the bright side
Efa niteny ny fahadisoam-panantenako tamin'ny fitarihana ity fety ity aho, ny tsy fahampian'ny fandaminana, ny tsy nisian'ny vondrona vahiny, na eto an-toerana izany na iraisam-pirenena. Ary nandritra ny herinandron'ny fankalazana moa dia mbola nitombo ihany izany. Mety hiteny ny sasany fa tsy mijery ny lafiratsin-javatra loatra ny mpila ravinahitra ary tsy mitady afa-tsy ny zavatra ratsy holazaina. Saingy lazaiko anao…raha velona nandritra ny 1000 taona ny tanàna iray, ary tsy lazainao izay kasainao hotanterahina amin'ny fety izay mety atrehiny, raha tsy lazainao akory na dia ny andro izay mety tsy ahafahany mamonjy ny asany noho ny fanakatonana lalana na maro loatra ny arabe no mikatso tanteraka ny lalana, dia lazaiko … fa tsy mankasitraka izany loatra aho. Mampalahelo ilay drafi-pikarakarana ka azo ihomehezana.
Viet Tan manararaotra ny fotoana hikororohana ny ahiahiny momba ny toe-draharaha politika sy ny zon'olombelona ao amin'ny fireneny
Nizara trakitra, t-shirts ary satroka manambara ny fiandrianan'i Vietnam amin'ny nosy Paracel sy Spratly ny mpandray anjara avy eo an-toerana sy ampitan-dranomasina. Avy amin'i ezak'i Viet Tan hampahafantarana bebe kokoa ny tombontsoam-pirenena sy fitadiavana ny rariny ara-tsosialy sy fiovana demokratika amin'ny alalan'ny hetsika am-pilaminana io hetsika sivika io.
Ao amin'ny Facebook no amariparitan'i Doan Minh Ngoc ny ilana ny fiarovana ny hoavin'i Hanoi
Eny ary, raha tianao hatrany amin'ny fonao lalina any i Hanoi; satria mifamatotra tanteraka amin'i Hanoi ny fahazazanao, dia ho zava-dehibe kokoa noho izao fifaliana sy fihetsiketsehana miserana izao ny hoavin'i Hanoi. Hisy hetaheta izany ao anatinao hanao zavatra ho an'i Hanoi, fa tsy vitan'ny mirenireny eny amin'ny arabe na miakanjo t-shirt. Sa izaho miezaka ny mieritreritra hijery ny lafitsaram-piainako ihany izany. Na izany aza.